Industrylọ ọrụ ndụ abalị na COVID nwere ike ibikọ ọnụ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Industrylọ ọrụ ndụ abalị na COVID nwere ike ibikọ ọnụ
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ahụike • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Technology • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ọnwụ akụ na ụba nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka abalị na-eche ihu yana nsonaazụ ya metụtara ụlọ ọrụ ndị ọzọ ụdị njem a kpatara nnukwu nsogbu
2020 ewetawo a enweghi ihe omuma na nsogbu banyere nje nke ghọrọ oria ojoo, n'etiti 21st narị afọ
A mụrụ SieXsein Global site na njikọ mba ụwa nke otu ndị ọkachamara nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na ngalaba ụlọ ọrụ
Industrylọ ọrụ ndụ abalị nwere ike ịbụ ihe ngwọta maka ọrịa na-efe ugbu a ebe ọ nwere ike ịbụ isi nchọpụta mbụ ya na ndi ochichi na-achikota ma mee dika nkpuchi iji gbochie oria nje a
Kpọmkwem otu afọ gara aga, a manyere ebe ndụ abalị niile n'ụwa niile imechi ọnụ ụzọ ha n'ihi mgbasa ngwa ngwa nke coronavirus. Ọ bụghị naanị na ebe metụtara emetụta kamakwa ụfọdụ ememme egwu kachasị mkpa dị ka Coachella, Ememe Ultra Music, Tomorrowland Winter na Snowbombing ekwuputala oge ịkwụsị ya iji gbochie ọrịa ahụ.
Ọnwụ akụ na ụba nke ụlọ ọrụ ahụ na-eche ihu yana nsonaazụ ya metụtara ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara ụdị njem a kpatara nnukwu nsogbu na enyemaka kwesịrị ekwesị nke rịọrọ gọọmentị ọ bụla emebeghị, na-ahapụ ọtụtụ azụmaahịa na enweghị ego yana nnukwu nsogbu akụ na ụba, tinyekwara ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ maka ọtụtụ akụkụ ahapụwo ha. Mmetụta nke mmechi ndị a na-amalite ịdọta uche gọọmentị ebe ọ bụ na ọtụtụ na-ata ahụhụ otu n'ime nsogbu kachasị na narị afọ gara aga, na-eme ka ha meghee ka ịmalite ịmaliteghachi akụ na ụba. Ọ dị mma ịsị na akụ na ụba abalị na-ebute oke akụ na ụba maka obodo na mba ụwa.
Ihe 2020 wetara anyị bụ a enweghi ihe omuma na nsogbu banyere nje nke ghọrọ oria ojoo, n'etiti 21st narị afọ. Agbanyeghị, oge nsogbu ndị a akpọwo maka njikọ karịa oge ọ bụla ma meghee ụzọ maka ụlọ ọrụ, nzukọ, na ụlọ ọrụ, ma nke onwe ma nke ọha na eze iji sonyere na "Chọọ ala nkịtị".
Ihe dị mma ikwu bụ na ndị klọb enwebeghị ike ịpụ apụ n'ihe karịrị otu afọ, na-eme ka ha bụrụ ndị "agụụ na-agụkọ mmekọrịta" ọkachasị mgbe ha na-atachi obi na nsonaazụ nke ịnọ na nnọpụiche ma na-erubere iwu iwu.
A mụrụ SieXsein Global site na njikọ mba ụwa nke otu ndị ọkachamara nwere ogologo akụkọ na ngalaba dịka ahụike, gburugburu ebe obibi, teknụzụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Isi ihe mgbaru ọsọ na nka bụ ịmepụta oghere echedoro, yana ngwa na-amịpụta ọnụọgụ dị elu ruo 99,99% na njikwa nke nje ndị encapsulated (dị ka COVID-19). Nchikota nke isi ihe omuma 4 n’ime ndi otu mmepe; mgbochi nje, njigide, mwepu, na nlekota nje, na-enye 99,9% ihe ịga nke ọma na nzukọ ọ bụla ma ọ bụ obodo ọ bụla chọrọ itinye teknụzụ ahụ.
dị ka N'adịghị ka nnwale Sala Apolo, egwu egwu Sant Jordi na-abịanụ ka a na-ewere dị ka usoro ọgwụgwọ, kama ọ bụ mmemme "azụmahịa" ebe ndị na-ahazi enweworị obi ike na nchekwa ya. Ọzọkwa, ndị na-egwu egwu ga-abụ Lovehụnanya nke ndị nwanyị nwere mmasị nwanyị karịa ndị ọrụ afọ ofufo na a gaghị anwale ha mgbe ihe omume anyị na SieXsein Global na gọọmentị na-emekọrịta ugbu a maka ọganihu na imeghe ebe ndị na-ahụ maka abalị n'abalị n'ụwa niile nke na-anata nnukwu nzaghachi n'ihi ịpụ iche nke usoro a na-atụ aro.
Carmen Alvarez, onye isi oche nke SieXsein Global kwuru, sị, "Anyị bụ naanị ụlọ ọrụ nwere ihe ịga nke ọma na ijikọta na ịnye teknụzụ kachasị ọhụrụ na nke kachasị ala megide COVID-19 na otu ngwọta, ma na Spain ma na mba ụwa".
N'aka nke ọzọ, Joaquim Boadas, Secretary General nke Nighttù Mba Na -ahụ Maka Ndụ ekwuola, "itingche maka ọgụ ìgwè ehi abụghị nhọrọ, ebe ọ bụ na ọtụtụ azụmaahịa ndị na-ahụ maka ndụ abalị agaghị enwe isi ebe ahụ. Ọ bụ ya mere anyị ji na-ekwusi ike na mmekorita gọọmentị iji gosipụta na iji usoro kwesịrị ekwesị, ebe a ga-emepe ebe dị nchebe ”.
Nnwale Pilot, bụ ihe dị mkpa maka ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ahụ
Industrylọ ọrụ ndụ abalị nwere ike ịbụ ihe ngwọta maka ọrịa na-efe ugbu a ebe ọ nwere ike ịbụ isi nchọpụta mbụ ya na ndi ochichi na-achikota ma mee dika nkpuchi iji gbochie oria nje a. Inwe ule COVID iji nweta ebe obibi nke abalị nwekwara ike inweta nnukwu akụkụ nke ndị bi ebe a ga-anwale mgbe ha agaghị eme ya. Anyị na-akwado ule ọ bụla a na-eme na ebe a ga-ahụ ụzọ kachasị mma iji megharịa ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ emechibidoro kpamkpam maka afọ gara aga.
Lọ ọrụ mgbasa ozi na-ekwughachi ọtụtụ ule emere na ebe ndị dị ka Amsterdam, ebe mmadụ 1,300 bịara mmemme egwu na Ziggo Dome ezubere iji nyochaa ihe ize ndụ nke imeghe ebe ndị a ma mee atụmatụ maka ime ka mgbochi nke mkpọchi mkpọchi. Ebe egwuregwu Sala Apolo, na Barcelona na enweghị ọrịa nke ndị sonyere na ule pilot nke emere na Disemba gara aga.
Ọzọkwa, n’izu a, ndị gọọmentị Catalan na ndị na-ahazi ememme ekwuputala ọkwa egwuregwu pilot na Palau Sant Jordi nke Barcelona na Machị 27. Ndị bịara ya ga-anwale ule ngwangwa na nyocha na otu n’ime oghere atọ, ma ọ bụ Sala Apolo, Luz de Gas ma ọ bụ ụlọ nzukọ egwu Razzmatazz. Ndị na-anwale ihe ọjọọ ga-enwe ike iji ihe mkpuchi FFP2 sonye na mmemme ahụ, mana ọ gaghị achọ ịkpapụ mmekọrịta mmadụ.
Otú ọ dị, a ga-ekewa mpaghara a n'ime oghere anọ nke ọ bụla na-anabata mmadụ 1,800 ma a ga-agba mbọ izere ịba ụba n'ọnụ ụzọ na ụzọ ọpụpụ. Ọ ga - anabata ndị na - ege 5,000 ntị (na - eguzo), yana nnwale antigen maka ndị niile bịara ya mana enweghị mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
N'adịghị ka nnwale Sala Apolo, egwu egwu Sant Jordi na-abịanụ ka a na-ewere dị ka usoro ọgwụgwọ, kama ọ bụ mmemme "azụmahịa" ebe ndị na-ahazi enweworị obi ike na nchekwa ya. Ọzọkwa, ndị na-egwu egwu ga-abụ Lovehụnanya nke ndị nwanyị nwere mmasị nwanyị karịa ndị ọrụ afọ ofufo na a gaghị anwale ha mgbe ihe omume gasịrị.
Plagbọelu ụgbọelu dakwasịrị na Siberia, mmadụ iri na itoolu nọ na ya ...